60 minitra ao anatin'ny Apple, horonantsary fanadihadiana izay tsy azonao hatsahatra ny mijery | Vaovao IPhone
Andro vitsy lasa izay tao amin'ny CBS, ao anatin'ny fandaharana malaza «60 minitra» Niditra tao Apple izy ireo mba hiresaka amin'ireo olona manan-danja indrindra ao amin'ny orinasa, toa an'i Tim Cook, Jony Ive na Angela Ahrendts. "Paoma anatiny«, Izay no anarana nantsoin'izy ireo ny lohatenin'ity horonantsary fanadihadiana ity, mampiseho sary vitsivitsy anay ary manome antsipiriany vitsivitsy izay tena mendrika ny ho hitan'izay liana amin'ny fomba fiasan'ny orinasa, ary na dia miresaka momba ny olana manokana miaraka amin'ny CEO aza avy any Apple, Tim Mahandro. Eto izahay dia mamintina ny sasany amin'ireo fotoana mahaliana indrindra.
4 Fiarovana sy tsiambaratelo
Ny resadresaka dia manomboka amin'i Tim Cook miresaka momba ny efa-taona mahery teo an-tampon'ny Apple ary ny fomba itazonan'ny orinasa ny votoatin'ny mpanorina azy sy ny mpanentana lehibe indrindra nandritra ny taona maro. "Rehefa avy nihaona tamin'i Steve Jobs aho dia afaka milaza fa mbola tsy nahita olona teto amin'izao tontolo izao toa azy aho". Apple dia tsy mitovy amin'ny orinasa hafa satria tsy hoe manova an'izao tontolo izao fotsiny amin'ny vokatra vokariny izy, fa mahomby amin'ny ankamaroan'ny fotoana. Raha ny filazan'i Tim Cook, "ny fikatsahana fahalavorariana" dia ao amin'ny fototarazon'i Apple.
Tsy resadresaka nahafinaritra natao ho an'i Tim Cook izany, miaraka amina fanontaniana vitsivitsy. Mifandraika amin'ny Apple Watch sy ny zava-miafina momba ny tarehimarika amin'ny varotra, izay adikan'ny sasany ho fomba hanafenana ny tsy fahombiazan'ny fitaovana vaovaon'i Apple, Tim Cook dia tsy nanao afa-tsy ny mihomehy. Ilay mpanadihady aza dia nanizingizina ny amin'ny tsy fahombiazan'ny famantaranandro, nanamarika fa "manana laboratoara aza izy ireo hanatsarana ny Apple Watch."
Mazava ho azy fa manana toerana natokana manokana hanatsarana ny Apple Watch izahay. Ny vokatray rehetra, rehefa natomboka, dia efa miasa manatsara azy ireo. Indraindray aza izahay dia miasa amin'ny taranaka faharoa manaraka amin'ny vokatra raha mbola tsy namoaka ilay teo aloha izahay.
Na eo aza ny resadresaka am-panandramana mitady zavatra avy amin'ilay fiara Apple mety, dia mitsiky fotsiny i Tim Cook fa tsy milaza na dia teny iray aza. "Asa be ve ny milaza fa miasa eo ianao sa tsia, fa diso izany?" Notohizany nilaza tamin-jotom-po azy ny valiny, nefa tsy nisy vokany. Ny valin-teny avy hatrany nataony dia ny momba ny fiampangana nataon'ny Kaongresy amerikana an'i Apple fa ialany hetra: "Fako ara-politika izany." Valiny feno fanoloran-tena ho an'ny mpitarika ambony orinasa toa an'i Apple, saingy ny valiny iray dia mihoatra noho ny eritreritra fotsiny.
Apple dia manana ny volany any ivelan'i Etazonia satria ny 2/3 amin'ny orinasany dia any ivelan'i Etazonia. Tian 'ny fanjakana hitondrantsika mody an'io vola io ve isika? Eny, izy ireo manova lalàna iray natao tamin'ny fotoanan'ny Revolisiona Indostrialy ary manery anay handoa 40% amin'izany vola izany amin'ny hetra. Hadalana tanteraka izany lalàna izany ary tokony novana efa ela.
Tsy latsa-danja ihany koa ny ady hevitra omena azy rehefa anontaniana izy maninona Apple no manana ny orinasa lehibe ao Shina:
Manana ny ozininay any Shina izahay satria any no ahitanay mpiasa mahay indrindra amin'izany. Mitadiava mpiasa mahay any Amerika amin'ireny karazana ozinina ireny any Amerika, ary mahita vitsivitsy monja izahay hamenoana ity efitrano ity. Mitadiava azy ireo any Shina dia hameno kianja filalaovana baolina kitra maromaro ianao. Any Sina dia mahazo fiofanana ho an'ity karazana asa ity hatramin'ny fahazazany.
Izy dia iray amin'ireo olona manan-kery indrindra ao Apple amin'izao fotoana izao, ary ny tena mahery fo amin'ny fanadihadiana. 60 minitra no niditra tao amin'ny laboratoara, izay vitsy no nahavita niditra, ary eo no ahitantsika ny fomba fiasan'ny sasany amin'ireo mpamorona 22 miasa amin'ny Apple. Ekipa tena milamina izay tao anatin'ny 15 taona dia nahita olona roa nandao ny ekipa. Amin'ity ampahany amin'ilay fanadihadiana ity, ilay iray izay tena ankafizin'ny maro, nohazavainy ny fomba nanapahan'i Apple hevitra ny famoahana ireo maodelin'ny iPhone 6 sy 6 Plus navoakany herintaona lasa izay..
Nanamboatra maodely folo samy hafa an'ny iPhone 6 sy 6 Plus izahay, ary nifidy roa hapetraka eny an-tsena izahay satria izy ireo no nahazo aina indrindra ho anay, izay mety indrindra amin'ny tananay.
Iray amin'ireo tahirin-kevitra manaitra indrindra avy amin'ny "Inside Apple" i ny isan'ny olona miasa amin'ny fakantsary iPhone: injeniera 800 mahery, endrika azo antoka fa sarotra inoana. Asehon'izy ireo amintsika ny fomba namolavolany antsipiriany farany ny fakantsary finday ampiasaina indrindra, ny stabilizer, ny fomba fampifanarahana ireo jiro samihafa izay hita, sns
Hitanay akory fa i Apple dia manana maodelin'ny Apple Store iray izay anaovana andrana ireo fanovana rehetra tadiavin'i Angela Ahrendts, izay tompon'andraikitra amin'ireo fivarotana ara-batana an'ny orinasa. Ny talantalana, ny fampisehoana, ny latabatra ... Ny zava-drehetra dia karakaraina hatramin'ny antsipiriany farany ary mandalo ity modely ity aloha haben'ny fiainana alohan'ny handehanana any amin'ireo magazay tena izy.
Namaly izany ny Lehiben'ny Sales Officer an'ny Apple ny fanontaniana momba ny "cannibalization" an'ny vokatra. Mateti-pitranga amin'ny haino aman-jery manampahaizana manokana ny miresaka momba ny fomba fangalaran'ny vokatra vaovao ny fividianana vokatra efa misy, izay matetika voatsikera ho "tsy fahombiazan'ny Apple." Mazava be momba izany i Schiller:
Mazava ho azy fa tsy maintsy manolo ny hafa ny vokatra sasany. Rehefa manamboatra vokatra vaovao isika dia maniry ny hihinana ny hafa efa misy, izany dia famantarana fa fahombiazana izany. Ny ekipa Apple tsirairay dia maniry ny ho vokatra tsara indrindra, mifaninana amin'ny ekipa hafa. Io ihany no fomba fanaovana vokatra mety indrindra.
Nofaranana tamin'ny fahitana ny Apple Campus vaovao ity tatitra ity, asa pharaonic izay ho vita amin'ny taona ho avy. Ivon-toerana natao ho fanajana ny natiora amin'ny maha-izy azy, izay tsy mila aircon mandritra ny 9 volana amin'ny taona ianao ary ny loharanon'ny angovo dia ireo takelaka masoandro mandrakotra azy manontolo. Jony Ive koa dia mpamolavola ny Apple Campus vaovao, ary mampiseho am-pireharehana "antsipiriany kely".
Ity no vera miolakolaka lehibe indrindra manerantany. Izy io dia novokarina tany Alemana manokana ho antsika, ary tsy misy hafa toa an'izao tontolo izao. Saron'ity karazana fitaratra ity ny trano.
Nofaranana tamin'i Tim Cook ihany ny resadresaka tamin'ny farany, niresaka momba ireo fiampangana an'i Apple momba ny tsy fahampian'ny fanohanany amin'ny ady atao amin'ny fampihorohoroana. Ny zava-drehetra dia avy amin'ny encryption data izay ataon'i Apple amin'ny fitaovany ary na ny orinasa aza tsy afaka mamoaka. Izany no mahatonga ny iPhone ho fitaovana ampiasain'ny mpampihorohoro (sy mpanao heloka bevava hafa) ary manasarotra ny asa ho an'ny mpitandro ny filaminana.
Raha mangataka fiaraha-miasa amin'i Apple ny mpitsara dia faly izahay manampy an'izay azonay atao. Saingy tsy manana fomba hahafantarana ny angon-drakitra momba ny mpampiasa izahay satria voahidy izany ary tsy manana ny lakileny hanafoanana azy. Misy milaza amintsika ny hamoronana "varavarana ambadika" hahafahantsika mampiasa azy rehefa anontaniana. Fa raha manao zavatra toy izany isika, iza no afaka manome toky fa tsy misy mahita io varavarana io ary mahazo miditra ihany koa? Any Etazonia isika, eto dia tsy tokony hisafidy ny filaminana sy ny fiainana manokana, ny lafiny roa dia tsy maintsy azo antoka.
Ireo dia sombiny vitsivitsy monja amin'ny zavatra azo jerena amin'ny horonantsary voalohany izay rohy anananao eo am-piandohan'ny lahatsoratra. Tena mendrika jerena izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » 60 minitra ao anatin'ny Apple, fanadihadiana iray izay tsy afaka mitsahatra mijery
RAFEL dia hoy izy:
Ilaina ny fampiharana vaovao Cas, izay tsy ao amin'ny AppStore Espaniola. Fomba hafa.
Valiny amin'i RAFEL
Hitako tamin'ny solosaina mampiasa Safari tsy misy olana izany.
Voasambotry ny polisy ireo iPhone 740 azo tamin'ny karatra sandoka
GOTPass, ny ho avin'ny tenimiafina misy lamina sy sary